Guriga - Golaha Dhexe ee Xeebta
Dib u warshadaynta Daboolka Jaallaha ah
Beerta Daaqa ee Daboolka Cagaaran
Qashinka Guud ee Daboolka Cas
Maalinta Aruurinta Bin
Ka warbixi adeeg la seegay
Dib u hagaajinta iyo Bedelaada
Qashinnada Dheeraadka ah
Wax ka beddel qashinkaaga
Adeegga Qashinka Cusub
Adeegyada Qashinka Ganacsiga
Dib u warshadaynta caagaga jilicsan
Buug ururinta Kerbside Bulk
Ka warbixi Adeeg Bulk ah oo seegtay
Barnaamijyada Waxbarashada Bulshada
Tusaha Qashin tuurka & Dib u warshadaynta AZ
Hub Hub ah
Taas dib uma warshadayn kartid!
Cleanaway Somersby Maalinta Furan
Barnaamijka Waxbarashada Dugsiyada
Xaashiyaha waxqabadka iyo agabka fasalka
1Wararka Iskuulka Xeebta
Kala-soocida Yaryar Barnaamijka Barashada Hore
Kala sooc oo GUUL
Qashinka Kale & Dib u warshadaynta
Xarumaha Qashinka Xeebta Dhexe
Dib u warshadaynta qashinka Elektarooniga ah
Light Globe, Taleefanka gacanta iyo dib u warshadaynta baytariyada
Siringo Badbaado leh iyo Tuur Irbad
Ka warbixi qashinka la tuuray
Dib u warshadaynta joodariga
Dib u warshadaynta birta ee qashinka
OGAYSIIS MUHIIM AH ADEEGYADA QASHINKA BULQA: hakadka ku meel gaadhka ah ee ballansashada ururinta kerbside bulk waa laga saaray dadka deggan Bartamaha Xeebta waxay hadda awoodaan inay ballansadaan adeegga kerbside bulk. Shaqaalaheenna waxaa weli saameeya faafitaanka fayraska Covid-19 ee hadda jira, si kastaba ha ahaatee xeerarka cusub ee go'doominta ayaa hoos u dhigay saameynta waxaana awood u yeelan doonnaa inaan dib u bilowno adeegyada iyadoo xaddidan. Maaddaama aan wali la kulmeyno kheyraad yari, awoodda adeegga buuxda waxaa laga yaabaa in aan la heli karin dhowr toddobaad, sidaas darteed dadka deegaanka waxaa laga yaabaa in ay ogaadaan in la siiyay taariikhda ballansashada dhowr toddobaad gudahood. Haddii aad ballansato adeegga kerbside bulk, hubi inaad hubiso taariikhda ballansashadaada oo aad qashinkaaga badan dhigtid kerbside maalin ka hor taariikhda ballansashadaada. Waxaan rabnaa inaan uga mahadcelinno Bulshada Xeebta Dhexe dulqaadka ay muujiyeen.	x
Ilowday eraygaaga sirta ah Saxiix
Maxaa ku dhex jira...
Hagahaaga isticmaalka qashinka dib u warshadaynta.
Hagahaaga isticmaalka Binkaaga Dhirta Beerta.
Hagahaaga isticmaalka guud ee qashinkaaga qashinka
1xeeb 1 adduun. Adeegyada qashinka iyo dib u warshadaynta
Halkan waxaad ka heli kartaa dhammaan waxaad u baahan tahay inaad ka ogaato maaraynta qashinka iyo adeegga dib u warshadaynta ee la siiyo dadka deggan Xeebta Dhexe ee NSW. Waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad sahamiso, dhex gasho, ogaato oo aad barato. Waxa kale oo jira macluumaad badan oo loogu talagalay carruurta iyo ardayda da 'kasta leh. Si aad u bilowdo dhagsii tab adeega aad rabto in aad wax badan ka ogaato ama isticmaal raadinta xagga sare ee bogga.
Golaha xeebaha dhexe Nadiifinta
Dhammaan su'aalaha adeegga wac 1300 1XEEBTA (1300 126 278)
aqoon isweydaarsiyada qashinka ee dugsiga
Xaashiyaha waxqabadka carruurta iyo agabka fasalka
Adeegyada qashinka & dib u warshadaynta
Xuquuqda daabacaadda 2018 Cleanaway